Ukuhlolisisa isixeko sase-Antiyokwe esiseBhayibhileni esincinane
Ukuhlola iTestamente Entsha yaseAntiyokwe
Funda malunga nendawo apho abantu babizwa khona kuqala "ngamaKristu."
Xa kuziwa kwiidolophu ezisemgangathweni zeTestamente eNtsha, ndoyika u-Antiyokwe ufikelela ekupheleni kwetonga. Andizange ndive ngoAntiyokwe kude kube yilapho ndathatha inqanaba leMasters kwinqanaba lecawa. Mhlawumbi kuba akukho ncwadana yeTestamente eNtsha iqondiswa kwicawa eAntiyokwe. Sinabase-Efese kwisixeko sase-Efese , sinabo abaseKolose kwisixeko saseKolose - kodwa akukho-1 kunye no-Antiyokwe-2 ukusikhumbuza loo ndawo.
Njengoko uza kubona ngezantsi, le nto ihlazo. Ngenxa yokuba unokwenza ingxabano ephosakeleyo ukuba iAntiyokwe yeso sixeko esibaluleke kakhulu kwimbali yecawa, emva kweYerusalem kuphela.
Idolophu yaseAntiyokwe yakudala yayisungulwa njengengxenye yoBukumkani bamaGrike. Isixeko sakhiwa nguSeleucus I, owayengu-general Alexander .
Indawo: Kutholakala malunga neekhilomitha ezingama-300 kumntla weYerusalem, iAntiyokwe yakhiwa eduze kweMlambo i-Orontes kwinto eyiTurkey namhlanje. I-Antiyokwe yakhiwa nje ngeekhilomitha ezili-16 ukusuka kwinqanawa eLwandle lweMeditera, okwenza kube ngumzi obalulekileyo kubahwebi nabarhwebi. Esi sixeko saye sasikufuphi kwindlela ebalulekileyo edibanisa uBukumkani bamaRoma kunye ne-Indiya nePersia.
Kubaluleka: Ngenxa yokuba iAntiyokwe yayiyinxalenye yeendlela ezinkulu zorhwebo kunye nolwandle kunye nomhlaba, isixeko sakhula ngokukhawuleza kubemi kunye nempembelelo. Ngexesha lecawa yokuqala phakathi kweXesha lokuQala lokuqala, i-Antiyokwe yayingumzi wesithathu ngobukhulu eMbusweni waseRoma-usezantsi emva kweRoma kunye ne-Alexandria kuphela.
Inkcubeko: Abathengisi baseAntiyokwe bathengiselana nabantu behlabathi lonke, ngenxa yoko iAntiyokwe yimizi ehlukeneyo-kuquka nabemi baseRoma, amaGrike, amaSiriya, amaYuda kunye nokunye. I-Antiyokwe yayingumzi ocebileyo, njengoko abemi balo abaninzi baxhamla kwizinga eliphezulu loshishino kunye norhwebo.
Ngokwemigaqo yokuziphatha, iAntiyokwe yayinenkohlakalo enkulu. Iziqhamo ezidumiweyo zeDaphne zazifumaneka emaphethelweni esi sixeko, kuquka netempile eyazinikela kunkulunkulu ongumGrike uApollo . Oku kwaziwa emhlabeni wonke njengeendawo zobugcisa nobugcisa obungunaphakade.
Njengoko ndathetha ngaphambili, iAntiyokwe yenye yezona zibini ezibalulekileyo kwizixeko zobuKristu. Enyanisweni, ukuba kwakungekho kwa-Antiyokwe, ubuKristu, njengoko siyazi kwaye siyayiqonda namhlanje, buya kuba buhluke kakhulu.
Emva kokuqaliswa kwecawa yokuqala kwiPentekoste, abafundi bakaYesu bokuqala bahlala eYerusalem. Amabandla okuqala ecawa ayeseYerusalem. Ewe, oko sikuyazi njengokuba ubuKristu namhlanje buqala ngokwenene njengecandelo lamaYuda.
Izinto zatshintsha emva kweminyaka embalwa, nangona kunjalo. Ngokukodwa, batshintsha xa amaKristu eqala ukufumana intshutshiso enkulu ezandleni zamaRoma kunye neenkokeli zonqulo zamaYuda eYerusalem. Le ntshutshiso yafika entloko ngokukhanda ngamatye umfundi omncinane ogama linguStefano -isiganeko esibhalwe kwiZenzo 7: 54-60.
Ukufa kukaStefano njengomfel 'ukholo wokuqala ngenxa kaKristu kwavula izikhukhula ngokutshutshiswa okukhulu kunye nobudlova kwicawa kulo lonke iYerusalem.
Ngenxa yoko, amaKristu amaninzi ayabaleka:
Ngaloo mini intshutshiso enkulu yaqhekeka kwicawa eYerusalem; bonke ngaphandle kwabapostile bahlakazeka kulo lonke elaseJudiya naseSamariya.
IZenzo 8: 1
Njengoko kwenzeka, iAntiyokwe yenye yezona ndawo amaKristu aqala ukubaleka kuzo ukuze asinde intshutshiso eYerusalem. Njengoko kuthethwe ngaphambili, iAntiyokwe kwakuyisixeko esikhulu kunye nesicebileyo, esenza indawo efanelekileyo yokuhlala kunye nokudibanisa nesihlwele.
E-Antiyokwe, njengakwezinye iindawo, ibandla elidingisiwe laqala ukukhula kwaye likhule. Kodwa enye into eyenzeka eAntiyokwe eyatshintsha ngokwenene ikhosi yehlabathi:
19 Kwaye abo babesasazeke ngentshutshiso eyaqhekeka xa uStefano wabulawa wahamba waya eFenike, eSipro naseAntiyokwe, esasaza ilizwi kuphela kumaYuda. 20 Kwaye ke abanye kubo, besuka eKhupro naseKrene, baya eAntiyokwe, baqala ukuthetha namaGrike, bebaxelela iindaba ezilungileyo ngeNkosi uYesu. Isandla seNkosi sasinabo, kwaye abantu abaninzi bakholelwa baza bajika eNkosini.
IZenzo 11: 19-21
Umzi waseAntiyokwe mhlawumbi wawuyindawo yokuqala apho abantu abaninzi beZizwe (abangewona amaYuda) bajoyina ibandla. Ngaphezu koko, iZenzo 11:26 zithi "abafundi babebizwa ngokuba ngamaKristu kuqala eAntiyokwe." Oku kwakuyindawo eyenzekayo!
Ngokweenkokheli, umpostile uBarabus wayengowokuqala ukuqonda ubuninzi becawa eAntiyokwe. Wathuthela apho esuka eYerusalem waza waqhuba ibandla ukuba liqhubeke nempilo kunye nokukhula, zombini kunye nokomoya.
Emva kweminyaka emininzi, uBarabus waya eTarsu ukuze afune uPawulos ukuba ajoyine naye emsebenzini. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali. UPawulos wafumana ukuzithemba njengomfundisi kunye nomvangeli eAntiyokwe. Kwaye kwakusuka eAntiyokwe ukuba uPawulos waqalisa nganye ihambo lwakhe lobuthunywa-mvangeli - izivunguvungu ezashumayela icawa eyayikunceda icawa liqhekeke kwihlabathi elidala.
Ngamafutshane, isixeko sase-Antiyokwe sidlale indima enkulu ekumiseni ubuKristu njengenkolo yonqulo namhlanje. Kwaye oko, kufuneka kukhunjulwe.
Umfazi Ofunyanwa Ngombulo - IBhayibhile Ingxelo-nkcazo
Iiminyaniso zeBhayi- bhile
ITire, eLebhanon: Iifoto kunye neMifanekiso
Isiqhamo Somoya SeBhayibhile Isifundo: Ubumnene
Iiprogram zeProsoft Software
Isikhokelo soMqala kwi-Exorcism
IVangeli NgokukaMarko, Isahluko 2
Isingeniso kubaProfeti abancinci
Isiqhamo Somoya WeBhayibhile Isifundo: Ukunyamezela
Iinjongo Zenjongo Ezivelisa Iziphumo
Iingxelo ezintathu zeeNcwadi zeMatketeers
Ivili kunye namanye amaClassics angapheliyo Aphinde ahlaselwa
I-Elon University Photo Tour
100 Medley ngamnye (IM) Uhlambe umsebenzi
IiNorthernmost Cities zelizwe
Imibuzo yoSuku lweeNtshukumo zika-Ephreli
Yintoni engapheliyo kwiKholeji?
Iingxabano ezinkulu kunazo zonke kwi-History of Boxing History
Umbutho weZizwe eziMzantsi-mpuma Asia-ASEAN
Iimviwo ezikhuthazayo zootitshala
Yintoni i-Chemical Composition yeVinegar?
Ukufumana Indawo Yokuzalwa Yakho Ukhohlakeleyo Wokufuduka
Iinqununu zaseNew York Yankees Amanqaku onke ixesha
Yintoni i-Annotated Bibliography?
Iimvakalo Zokungabi Necala Ukuthi, 'Uzibuhlungu'
Izizathu Ezilungileyo Ezintathu Ukungazithengi I-Essay Online